Courier Delivery & Cash Payments | Ora: 9: 00 - 21: 00 | Antso & SMS & WhatsApp 24 / 7, Andalana + 66 94 635 76 37
FREE DELIVERY hanitatra
FIZARANA 1 - Inona no Hataonao eo Amin'ny INFORMATION?
Rehefa mividy zavatra avy amin'ny toeram-pivarotana, izay tafiditra ao amin'ny fividianana sy ny fivarotana Mandritra izany dia hanangona ny mombamomba anao manome antsika toy ny anaranao, adiresy sy ny adiresy mailaka.
Rehefa mijery ny fivarotana, isika koa dia tonga dia mahazo ny solosaina ny Internet Protocol (IP) adiresy mba hanome antsika amin'ny fanazavana izay manampy antsika hianatra momba ny navigateur sy ny rafitra miasa.
Email barotra (raha azo atao): Miaraka amin'ny fahazoan-dalana ny, mba handefa anareo mailaka momba ny fivarotana, ny vokatra vaovao sy fanavaozam-baovao hafa.
FIZARANA 2 - Consent
Ahoana no hahazoana ny fankatoavana?
Rehefa manome antsika fanazavana manokana hamita ny raharaham-barotra, manamarina ny carte de crédit, mametraka baiko, handamina ny fanaterana na hiverina ny fividianana, dia midika fa manaiky ny fanangonana azy io sy ny fampiasana azy io noho ny antony manokana irery ihany.
Raha mangataka ny mombamomba noho ny antony faharoa, toy ny fivarotana, na dia hanontany anareo naneho mivantana noho ny fanekena, na manome anao fahafahana hiteny hoe tsia.
Ahoana no fomba hiala ny manaiky?
Raha aorian'ny fisafosanao, manova ny sainao ianao, dia afaka manajanona ny fanekenao izahay mba hifanerasera aminao, amin'ny fanangonana tahiry, fampiasana na famoahana ny fampahalalam-baovao, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny Mifandray aminay
FIZARANA 3 - famborahana
Mety mamboraka ny mombamomba raha toa isika takian'ny lalàna ny manao izany, na raha mandika ny fepetram-Service.
FIZARANA 4 - SHOPIFY
Ny fivarotana dia nampiantrano amin'ny Shopify Inc. manome antsika izy ireo amin'ny aterineto e-varotra sehatra izay mamela antsika mba hivarotra ny vokatra sy ny tolotra ho anao.
Ny tahirin-kevitra dia voatahiry amin'ny alalan'ny tahirin-kevitra Shopify ny fitehirizana, ny tahiry ary ny ankapobeny Shopify fampiharana. Izy ireo mitahiry ny tahirin-kevitra azo antoka eo amin'ny lohamilina ambadiky ny Firewall.
Raha misafidy ny fandoavam-bola mivantana vavahady mba hamita ny fividianana, dia Shopify mitahiry ny carte de crédit tahirin-kevitra. Izany no voaaro amin'ny alalan'ny Indostria ny fanomezana Card Data Security Standard (PCI-DSS). Ny raharaham-barotra order antontan-kevitra no voatahiry ihany raha mbola ilaina mba hamita ny fividianana raharaham-barotra. Rehefa ny efa vita, ny raharaham-barotra vaovao order dia voafafa.
Ny vavahadim-bola mivantana rehetra dia manaraka ny fenitra napetraky ny PCI-DSS araka ny fitantanana ny PCI Security Standards Council, izay fiaraha-mientan'ny marika toy ny Visa, MasterCard, American Express ary Discover.
PCI-DSS fepetra manampy antoka ny azo antoka fikirakirana ny carte de crédit vaovao amin'ny alalan'ny fivarotana sy ny mpanome tolotra.
Raha te hahalala bebe kokoa ianao, dia azonao atao koa ny mamaky ny fomba amam-panao amin'ny Shopify momba ny Service eto na ny fanambarana manokana momba izany.
FIZARANA 5 - X-PARTY SERVICES
Amin'ny ankapobeny, ny antoko fahatelo-ampiasain'ny mpamatsy antsika dia hanangona ihany, fampiasana sy manambara ny vaovao ho an'ny araka ilaina ny mamela azy ireo hankatò ny asa dia manome ho antsika.
Na izany aza, nisy antoko fahatelo-mpanome tolotra, toy ny fandoavam-bola sy ny fandoavam-bola vavahady barotra processors, manana ny fiainana manokana ny politika amin'ny fanajana ny vaovao isika dia ny manome azy ireo noho ny vidin-mifandray varotra.
Fa amin'ireo mpamatsy ireo, dia manoro hevitra fa mamaky ny fiainany manokana ny politika mba hahafahanao hahatakatra ny fomba izay ny mombamomba ho hokarakaraina ny amin'ireo mpamatsy ireo.
Tadidio manokana fa mety misy orinasa sasantsasany izay manana tranokala any amin'ny faritra hafa noho ianao na izahay. Noho izany raha mifidy ny handroso amin'ny raharaham-barotra izay misy ny serivisy mpanome tolotra iray hafa ianao, dia mety hampiharan'ny lalàna ny soso-kevitra omen'io mpanome tolotra na tranokala io.
Ohatra, raha toa ianao ka hita any Kanada sy ny raharaham-barotra dia ampiasaina amin'ny alalan'ny fandoavam-bola vavahady miorina ao Etazonia, dia ny mombamomba ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny raharaham-barotra mety ho iharan'ny United States famborahana eo ambany lalàna, anisan'izany ny Patriot Act.
Rehefa tsindrio eo amin'ny rohy eo amin'ny fivarotana, dia mety hitarika anao avy amin'ny toerana. Isika tsy tompon'andraikitra ny fiainana manokana fanaon'ny toerana hafa ary mampirisika anao mba hamaky ny fiainana manokana fanambarana.
FIZARANA 6 - ARO
Mba hiarovana ny vaovao manokana, dia mandray ny antonony sy hanaraka orinasa fepetra fanao tsara indrindra mba hahazoana antoka kosa tsy mba inappropriately very, namazivazy, jerena, nampahafantatra, nanova na rava.
Raha manome ny fampahalalana momba ny karatra misy anao ianao, dia ampidirina ny fampahalalana amin'ny fampiasana teknolojika azo antoka (SSL) Ary voatahiry miaraka amin'ny famoahana AES-256. Na dia tsy misy fomba amam-panaovana ny Internet na ny fitehirizana elektronika dia ny 100% antoka, manaraka ny fepetra PCI-DSS rehetra isika ary manatanteraka ny fenitra ankapobeny ankapobeny.
Ity ny lisitry ny cookies ampiasaintsika. Nosoritsorinay eto izy ireo mba hahafahanao misafidy raha te hiala amin'ny cookies ianao na tsia.
_session_id, tsy manam-paharoa famantarana, sessional, Ahafahan'ny Shopify mitahiry fanazavana momba ny fivoriana (fanondroana, fipetrahana pejy, sns).
_shopify_visit, tsy misy rakitra natao, mikiry ny 30 minitra avy amin'ny fitsidihana farany, nampiasaina noho ny tranonkala ny anatiny mpamatsy by MediaWiki Tracker mba hanoratra ny isan'ny mpitsidika
_shopify_uniq, tsy misy rakitra natao, Tapitra misasakalina (mikasika ny vahiny) ny ampitson'iny, Zava-dehibe ny isan'ny nitsidika ny fivarotana iray tokan-tena mpanjifa.
sariety, tsy manam-paharoa famantarana, maharitra ny 2 herinandro, antsinjarany vaovao momba ny votoatin'ny ny sariety.
_secure_session_id, tsy manam-paharoa famantarana ireo ka sessional
storefront_digest, tsy manam-paharoa famantarana, tsy voafetra ny fivarotana Raha manana tenimiafina, izany dia ampiasaina mba hamaritana raha toa ka amin'izao fotoana izao dia manana fidirana vahiny.
FIZARANA 7 - TAONA NY fanekena
Amin'ny alalan'ny fampiasana ity tranonkala ity ianao, dia maneho fa ianao, fara fahakeliny, ny taona maro an'isa ao amin'ny fanjakana na ny faritany-ponenana, na hoe ianao no taona maro an'isa ao amin'ny fanjakana na ny faritany ponenana, ary efa nanome antsika ny manaiky ny hamela na dia iray akory ny tsy ampy taona mba hampiasa dependents ity tranokala ity.
FIZARANA 8 - fanovana IZAO Fitsipika
Isika hitehirizany ny zo manova ity politika fiainana manokana na oviana na oviana, koa miangavy mamerina izany matetika. Fiovana sy ny fanazavana hitondra fiantraikany eo amin'ny fandefasana avy hatrany ao amin'ny tranonkala. Raha manao fitaovana fanovana io politika, dia hampahafantatra anareo eto fa voalaza fanavaozana, ka dia fantatrao ny zavatra vaovao no manangona, ahoana no mampiasa azy io, ary ahoana no toe-javatra, raha misy, mampiasa sy / na manambara izany.
Raha toa ny fivarotana na dia nahazo natambatra tamin'ny orinasa iray hafa, ny vaovao dia mety ho nafindra tany amin'ny tompony vaovao, ka mba hanohy ny hivarotra vokatra ho anareo.
FANONTANIANA SY fifandraisana vaovao
Raha tianao ny: miditra, manitsy, manitsy na mamafa ireo fampahalalana manokana momba anay, manoratra fitarainana, na mangataka fotsiny ny fampahalalana bebe kokoa.
© 2018, Zo rehetra voatokana ny zon'ny mpamorona lalàna HGHThailand.com | politika fiarovana fiainan'olona | Mombamomba ny fanompoana | Refund politika | Tsy manome antoka | Hizaha ny toerana misy azy Fanohanana avy amin'ny: FitHamster | mpiara-miasa: HGH Thai | E-Commerce Registration Number: 0167552340007